Azo antoka fa nahita ny fananana tonga lafatra ho anao ao amin'ny G-11 ianao. Izahay dia manana anao hipetraka amin'ity trano tsara indrindra hofainao ity. Ankoatr'izay, manana endrika tsara tarehy io. Ity ny Trano, mino izahay fa ho lavorary mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Topazo maso ny fananana tsara indrindra avy amin'ny G-11 amin'ity pejy ity. Topazo maso ity fananana 5 Marla ity ary alao sary an-tsaina hoe nahita ny tsara indrindra ho anao ianao. Raha nijery ny sasany amin'ireo lisitry ny fananana hafa amin'ity sokajy 30000 Rs ity ianao, dia mariho tsara fa tolotra ity. Raha te-hahazo fanazavana fanampiny momba ny tolotra ianao dia mifandraisa aminay.
425,000 PKR / Isam-bolana
350,000 PKR / Isam-bolana